संघर्ष - Dalit Online
कतारबाट पूर्णबहादुर सुनार उल्टै ऋणको भारी बोकेर फर्के
काठमाडौं—कोरोनाका कारण लकडाउनमा परेका बागलुङको निसिखोला गाउँपालिका–३, धाराखर्कका पूर्णबहादुर सुनार, १७ असारमा काठमाडौं ओर्लिए । भारी मन, भारी जीवन, तैपनि बाँच्ने, खुसी हुने र बाँड्ने आशा मेटिएको छैन । दुईचार पैसा कमाएर ल्याउँला र परिवारलाई खुसी राखौंला भनेर परदेश पुगेका पूर्णबहादुर जस्तै धेरै नेपाली नागरिक अहिले समस्यामा छन् । कोरोनाका कारण काम र दाम दुवै […]
गरिबको सहारा बन्दै केदार गान्धारी
कोभिड—१९ को जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्यो । सबैको मनमा लाग्यो,यो अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास होला । लकडाउनको अवधि सकिएको दिन खुल्छ होला भनेर धेरैले अनुमान गरे । तर त्यो भएन नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर बढ्दै गयो र लकडाउनको अवधि र कडाई झनझन बढ्दै गयो । एक जिल्लाबाट […]
जनप्रतिनिधिको अनुभव : विभेद नै उच्च जातिको धर्म !
त्यो दिन सम्झँदा आज पनि मन अमिलो हुन्छ । त्यसबेला म विभेद सहन बाध्य थिएँ । विभेदको प्रतिवाद गर्ने क्षमता ममा थिएन । म ग्रामीण भेगको दलित र गैरदलितहरूको मिश्रित समुदायमा जन्मिएकी हुँ । मैले बाल्यावस्थादेखि नै जातीय विभेद भोग्नु र सहनु पथ्र्यो । ७ वर्षकी हुँदा एक दिन पँधेरामा पानी लिन प्लास्टिकको सानो ग्यालेन […]
प्रहरीको जागिर छाडेर सगरमाथाको शिखरमा पुगेकी कुमारी ज्ञानमाला रणपालकाे संघर्ष
बुटवल – हिमाल आरोहण गर्न आँट, साहस र हिम्मत चाहिन्छ । नेपालको पहिलो सगरमाथा आरोही पासाङ ल्यामु शेर्पा विश्वको सर्वोच्च शिखर चढ्दा कपिलवस्तुकी कुमारी ज्ञानमाला रणपाललाई पनि हिमाल चढने मोह थियो । साहसी र हक्की स्वभावकी उनलाई घरको पारिवारिक अवस्थाका कारण युवा अवस्थामा त्यो सोच पूरा गर्न सकिनन् । आर्थिक अवस्था घरको कमजोर नैं थियो […]
म उही अछुत मुसहरनी नै भएँ
मुसहर समुदायकी मालती सदा नर्स हुन् । तर, उनी विगत दुई वर्षदेखि बेरोजगार छिन् । शिक्षाको सिँढी उक्लेपछि पनि जातिको सिँढीमा उनी पिँधमै धकेलिइन् । निकै संघर्षपूर्ण यात्रापछि नर्स बनेकी उनी अझै सरकारी जागिरे बन्ने प्रयासमा छिन् । मुसहर महिलाले भोग्न बाध्य विभेद र संघर्षबारे उनले आफ्ना अनुभूति साटेकी छिन् : म ०४२ सालमा सिरहाको […]
तीन जोर माला
सरस्वती पूजाको दिन । स्कुलमा ध्वजापताका टाँगिएका थिए । विद्यार्थीको लस्कर पूजाको थाली बोकेर सरस्वतीको मूर्ति राखिएको कोठातिर गइरहेको थियो । त्यही भिडमा थिइन्, कक्षा ६ पढिरहेकी– सीतादेवी बौडेल । पूजाको थाली बोकेर जब सीता ढोकामा पुगिन्, उनलाई शिक्षकले रोके । अघि बढ्न खोजिन् । शिक्षकले फेरि रोके । सीतालाई पूजाकोठाभित्र पस्नै दिइएन । रुखो स्वरमा शिक्षकले भने, ‘तिमी भित्र जान पाउँदैनौ । झ्यालबाटै […]
सारंगी फिँजाइरहेका कलाकार
युवराज भट्टराई अनिल गन्धर्वलाई धेरैले चिन्दैनन्। जतिले चिनेका छन्, उनीहरूको सामु छुट्टै परिचय बनाएर बाँचेका छन्, उनी। आफ्नो सारंगीको धुनले संगीतप्रेमीलाई लट्ठ पार्छन्। उनको सारंगीको धुनले ठमेलका धेरै क्याफे र लाउन्ज गुञ्जायमान छन्। संगीतको कुनै धुनसँगै जीवन बाँचिरहेका अनिल आफ्नो पहिचानको खोजीमा छन्। संगीत र संगीतसँग जोडिएको परिचयसँग नै आफू वर्षौंसम्म डराएर बाँचेको उनी बताउँछन्। […]
सामाजिक अगुवाबाट राजनीतिक नेतृत्वसम्म
जाडो मौसमको चिसो बिहानीमा कलावती भाँड डडेल्धुरा बजारमा जानुभएको थियो । त्यति बेला उहाँ कक्षा दुईमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौँबाट जाडो विदामा घर जाुनभएको थियो । उहाँले त्यहीँ एउटा पसलमा सामान किन्नुभयो र पसलेको हातैबाट सामान लिनुभयो । अचम्म, पसलेको हातबाट सामान लिनु उहाँको ‘अपराध’ ठहरियो । त्यही ‘अपराध’को बदलामा कहिले पनि नबिर्सने गरी अपमानको […]
नेपालगन्ज—एक वर्ष अघि २०७४ असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बैजनाथ गाउँपालिकाबाट उपप्रमुखमा शारदा विश्वकर्मा र खजुरा गाउँपालिकाबाट एकमाया विक विजयी हुनुभयो । स्थानीय तह प्रमुख पदमा दलित महिला र दलित पुरुष विजयी छैनन् तर जिल्लामा ८ स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा जित्ने दुई दलित महिलामा शारदा र एकमाया रहनुभएको हो । जिल्लामा दुई दलित […]
विराटनगर – दुई वर्ष अघि आइरनले डामेर अमानविय यातना पाउनुभएकी दलित महिलालाई अदालतले न्याय दिएपछि समाजमा उहाँकाे आत्म सम्मान बढेको छ । २५ जेठ २०७३ मा छिमेकी तीन जना महिलाहरुबाट तातो आइरनले डामेर अमानबिय यातना पाउनुभएकी मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका ६ (गछिया)की दलित महिला ३५बर्षिया प्रमिला लकान्द्री (विश्वकर्मा)लाई अदालतले न्याय दिएपछि उहाँकाे समाजमा आत्म सम्मान बढेको […]
© 2020 Dalitonline.com. All Rights Reserved Website By, Darshan Infosys